ERW (Electro-Nemishonga Welded) Pipe Line - China Qingdao Haokun Machinery
ERW (Electro-Nemishonga Welded) Pipe Line
ERW (Electro-Nemishonga Welded) Pipe Line Somugumisiro nokukurumidza zvoupfumi munyika China, pane mukuru kudiwa hwakanaka, hombe dhayamita ERW sepombi nokuti mafuta & gasi chokufambisa, mvura & sewerage zvokufambisa uye vehurumende kuvakwa Mazinga. Kuti vagutse zvinodiwa zvedu nemakasitoma, tine pachake patented HAOKUN ERW Tube dzaFord yedu. TO-zuva, hatina kusvitsa guru dhayamita ERW16 ', ERW 20 ", ERW 24" yedu vatengi siyana. Isu pamwe kusimbisa nyaya apo isu ...
Somugumisiro nokukurumidza zvoupfumi munyika China, pane mukuru kudiwa hwakanaka, hombe dhayamita ERW sepombi nokuti mafuta & gasi chokufambisa, mvura & sewerage zvokufambisa uye vehurumende kuvakwa Mazinga. Kuti vagutse zvinodiwa zvedu nemakasitoma, tine pachake patented HAOKUN ERW Tube dzaFord yedu. TO-zuva, hatina kusvitsa guru dhayamita ERW16 ', ERW 20 ", ERW 24" yedu vatengi siyana. Isu pamwe kusimbisa nyaya apo tava kusvitsa munhu ERW 25 "Tube Mill kuna Guangzhou Juyi Pipe Factory. In Mill ichi, hatina vakagadzirawo mumwe Horizontal Loop Accumulator, kumhanya Coil Edge hwokugaya hwakabvira uye Flying Curter kuwedzera kugona kwaro. Imwe ERW 25 "Tube Mill chiri pari yaipiwa nesu kuna Mozambique WBHO Company. Kuwedzera kune izvi magwaro, isu kuunganidza pakutsvakurudza Data nokuda ERW 630 X 19.1 mm simbi mugwaro X80 mu kugadzirwa yedu raibhurari. Tinogona kutaura nechivimbo kuti yatakawana ehurumende -of-unyanzvi utsanzi kuti hombe dhayamita ERW Tube Mill.
Zvichitevera zvakasimba kukura Chinese upfumi, mukuru-sosaiti, hombe dhayamita uye yakakwirira kakawanda ngaatarire musono welded pombi zvinonzi nevakawanda kushandiswa munzvimbo dzakadai peturu chokufambisa, madhorobha Mapaipi network uye zvakagadzirwa, kungoita kumusoro kudiwa pavo, iyo pave itsva kukura mikana mutopota mutsetse kugadzira yemakambani uye midziyo vagadziri.
Mumakore achangopfuura, nokudzidza uye kuchipedza mazhinji ERW muchina michina kubva kunze kwenyika, isu yakagadzirirwa uye yakatanga guru dhayamita ERW Kugadzirwa mitsetse dzedu njere pfuma kodzero. Kunyanya vamwe anokwana zviyero kuroorwa, akadai manikidzira chinotenderera, vave patented mu China. Saka kure, tapedza afunge guru caliber ERW Kugadzirwa mitsetse pamwe nokurondedzerwa: 16 "ERW, 20" ERW, 24 "ERW. Pakati iwayo 20 "ERW, 24" ERW kugadzirwa zvigayo vakanga atoisa kushanda; For Guangzhou Juyi Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd, tipiwe yakakwana 25 "ERW dzaFord pamwe chinjikira loop. High Speed ​​Edge hwokugaya hwakabvira Machine pamwe pezimba raichekerwa mapuranga. Kucheka Machine uye Kupedza Area, akanga kutoshanda; boka rakakwana 25'ERW mutsetse kuti aivigirwa kuna WBHO South Africa iri kare pasi yokuedzwa.
Uyezve, kambani yedu Inoziva unyanzvi zvose nokuda ERW630x19.1mm nesimbi giredhi X80, uye kwakasimbiswa JCOE1420x32mm nesimbi giredhi X80 welded nyere dzaFord.
Strip simbi gadziriro chidimbu
Uncoiling : Two kutyaira kuwedzera miseve pamwe mashandiro anoita makakatanwa kuzvidzora uye zvido zvevanhu kugadziridzwa kuti ubvise simbi
Kuzosunungura simbi flattening muchina : With 5 kushanda mabhanzi akazarurwa / akavhara nokukurumidza nokuda hydraulic humburumbira.
Welding basa ndiro pa musoro nomuswe inoguma : Mad nomoto, CO2 gasi nhovo.
Horizontal nomoto muchina magadzirirwo : aibatanidza nokuveza uye nomoto pamwechete.
Positioning kuti ubvise simbi pamberi nomoto : vapiwa uyere uye swatanudza chinzvimbo chokuva ubvise simbi.
Spiral accumulator : Outside mu mukati kunze
Strip dzichifura kumhanya : Maximum 75m / min.
Nokukwirira rinopfungaira mutsetse : About 1000mm pamusoro jengachenga
Production muoti : enderera kugadzirwa
Speed okuwana mutsetse : 12m / Maminitsi ~ 25m / min.
Drive mhando huru puranga : Mumwe mupumburu iri yoga neshungu CNC AC shanduka Frequency nokukurumidza kuzvidzora kana DC nokukurumidza kudzora
Achigadzira zano : Isa ari rinopfungaira mutsetse, pasi nokuumba nzira
Kukwirira centre mutsetse : About 1000mm pamusoro jengachenga (sizing chikamu)
Mhando rokuumba : keji Anoumba
Mamiriro tikaisa chigayo : PLC raitungamirirwa nokukurumidza marongero maitiro uye Chinyorwa kumanikidzwa pakuvira
Kuchinja kuti chigayo mabhanzi : PLC raitungamirirwa otomatiki kugadziridza uye Chinyorwa kuchinja.
Inner Burr tichibvisa : Burr Rwomumwoyo iri scrapped nokushandisa mhete banga kuti iiswe anokosha turusi zororo.
Rokunze Burr tichibvisa : Two scrapers dzokunze Burr uye mumwe crimpers dzokunze Burr.
S izing kuti nyere : Four sizing mikoko inoshandiswa kugadzira tenderera nenyere.
Steel nyere kuswatura : ruramisa simbi nyere nokuda Turkey misoro uye sizing chigayo.
Mode kubhururuka dzawaona : CNC Double chigayo nokuveza musoro kukwira ndege akagura-kuti muchina.
Next: Zononoka Pipe Mill
30inch Longitudinal anyatsofukidzwa Arc Welded Steel Pipe Mill
30longitudinal anyatsofukidzwa Arc Welded Steel Pipe Mill
Pa762 Longitudinal anyatsofukidzwa Arc Welded Steel Pipe Mill
Advanced weld musono Heat Treatment
Erw Pipe Achigadzira Machine
Erw Pipe Mill gadzira
Erw Tube azoshandiswa Mill
kwakakurudzira Tube Ndakasarudza Machine
Vadyi garo Welding Machine
Longitudinal anyatsofukidzwa Arc Welding Pipe Machine
Longitudinal anyatsofukidzwa Arc Welding Pipe Mill
Lsaw Mukudhinda Line
Sawl Mukudhinda Line
SS Pipe Ndakasarudza Machine
Ssaw Pipe Mill 100 padiki
Ssaw Pipe Mill 120 padiki
Ssaw Pipe Mill 142 padiki
Ssaw Pipe Mill 20 padiki
Ssaw Pipe Mill 24 padiki
Ssaw Pipe Mill 32 padiki
Ssaw Pipe Mill 36 padiki
Ssaw Pipe Mill 40 padiki
Ssaw Pipe Mill 48 padiki
Ssaw Pipe Mill 56 padiki
Ssaw Pipe Mill 64 padiki
Ssaw Pipe Mill 72 padiki
Ssaw Pipe Mill 80 padiki
Ssaw Pipe Mill 86 padiki
Steel Pipe Ndakasarudza Machine
Chipini-Final Welded Pipe Mill
Chipini-Final Welded Pipe Mill 100
Chipini-Final Welded Pipe Mill 100 padiki
Chipini-Final Welded Pipe Mill 1422
Chipini-Final Welded Pipe Mill 1620
Chipini-Final Welded Pipe Mill 1820
Chipini-Final Welded Pipe Mill 2032
Chipini-Final Welded Pipe Mill 2200
Chipini-Final Welded Pipe Mill 2540
Chipini-Final Welded Pipe Mill 56
Chipini-Final Welded Pipe Mill 56 padiki
Chipini-Final Welded Pipe Mill 64
Chipini-Final Welded Pipe Mill 64 padiki
Chipini-Final Welded Pipe Mill 72
Chipini-Final Welded Pipe Mill 72 padiki
Chipini-Final Welded Pipe Mill 80
Chipini-Final Welded Pipe Mill 80 padiki
Chipini-Final Welded Pipe Mill 86
Chipini-Final Welded Pipe Mill 86 padiki